Ciidanka Xoogga dalka oo 33 Carruur ah ka soo bad-baadiyay Al-Shabaab, kuwa wareejiyay… – HalQaran.com
Sh/Hoose (Halqaran.com) – Ciidamada Xoogga Dalka ee Sida gaarka ah u tababaran ee Danab ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen Dagmada Kuntuwaarey ee Gobalka Shabeellaha Hoose waxey ku soo furteen 33 Carruur ah oo aan qaangaar aheyn, kuwaas oo si qasab ah ay uga soo wateen waalidiintooda maleeshiyada Al-Shabaab si ay u baraan afkaarta ay aaminsanyihiin.
Ciidamada ayaa markii ay la wareegeen gacan ku heynta dagmada waxay tageen xerada lagu hayay carruurtaan, iyagoo markii soo furteen si nabad ah ugu wareejiyay eheladooda.
Sidoo kale, Howlgalka oo bartilmaameedkiisu ahaa Horjoogeyaal iyo rag lagu dabajoogay oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa lagu soo qabqabtay Tobaneeyo ka tirsan Mintidiinta Al-Shabaab oo qaarkood ku xirnaa Saldhiga Dagmada.
Inta Howlgalka ay ciidamadu ku guda jireen ayay heleen xog dheeraad ah oo ku saabsan goobaha ay Al-Shabaab ku diyaariyaan Qaraxyada, waxaana halkaas laga qabtay Miinooyin iyo Maadooyin farabadan oo qaraxyada loo adeegsado.
Ugu dambeyn, Taliska Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in howlgalka uu ahaa mid lasii qorsheeyay, islamarkaana uu sii socon doono.
Tags: Al Shabaab, carruur la soo badbaadiyay, Ciidanka Danab, furasho, isqarxin, Kuntuwaarey, waalidiin